Buy Asus laptop (520,000Ks) in Yangon on ipivi.com
Seller: Naing Zay Yar Tun
Views: 199 (+ 1 )
#Laptop spec မရေးခင် ဒိlaptop မှာ ဘာကောင်းကွက်တွေပါလဲအရင်ကြည့်ရအောင် ။
#TYPE C ပါရှိခြင်း။
No.1 USB type C ဆိုတာ 2017 နှစ်အလယ်လောက်ကမှပူပူနွေးနွေး နည်းပညာအသစ်အဖြစ်စထွက်ပြိး 2018နောက်ထွက်ဖုန်းတိုင်းတောင်မှ Type C နည်းပညာကို ထည့်ထားတဲ့ဖုန်းက ရှားရှားပါးပါး ရယ်။
Type C ဆိုတာ USB 2.0 ,3.0တို့ထက် အားသွင်းအားထည့် Date အပြောင်းအလဲ ပိုမြန်တဲ့ အပေါက်ပေါ့ဗျာ ။ 2018 နောက်ပိုင်းထွက် laptopတိုင်းတောင် USB type C ကို upgrade လုပ်တဲ့ laptop 4မျိုးလားပဲတွေ့ဖူးသေးတယ်။
အဲ့တော့ Type C ပါတဲ့ Laptopဆိုတာထွက်တာသိပ်မကြာသေးဘူးပေါ့။
#Offical Window 10 နဲ့လာခြင်း။
NO2. Office Window 10 pro ဆိုတာလဲ ပြိးခဲ့တဲ့ 2016 ခုနှစ်ကမှစပြီးထွက်တာ။ အဲ့နောက်ပိုင်း Laptopတွေတိုင်းမှာတောင် Office Window 10 ကိုလိုချင်လို့ licence ဝယ်သုံးရတာ ။ ခု Showroomတွေမှာတောင် Window 8နဲ့ Laptop တစ်ချို့ကျန်သေးတော့ Window 10 ကို laptopဝယ်ကတည်းက ပါမယ် မယ်ဆိုရင် လိုင်စင်ထပ်ဝယ်စရာမလိုသေးဘူးဆိုရင်ဝယ်ရမတန်ဘူးလား။
#SSD 128 GB ကိုBuild in ပါခြင်း။ HHD 1000နဲ့အတူ 🤨
No3, SSD , SSD နဲ့လူတွေနောက်ပိုင်း Laptop windowတက်အောင် Speed ပိုမြန်လာအောင် Upgradeတွေလိုက်လုပ်နေကြတာ။ SSD 32 GB ကိုပင် ဈေး မနည်းပေးဝယ် ထပ်တင်နေရတာ SSD 128 ကို ဝယ်ကတည်းကိုက တပ်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုရင် ဘာလိုသေးလဲ ။ SSD 125 နဲ့အတူ HDD 1000 ပါတဲ့ laptop တွေ MSI ဈေးတွေနဲ့ဗျာ။ ခုက ရိုးရိုး i54Gen ဈေးနဲ့ရမှာဆိုတော့ Great . ( SSD ကိုဝယ်ကတည်းပါတဲ့ laptop ဆိုခပ်ရှားရှားအပြင် SSD 128 ဈေးကိုစူံစမ်းကြည့်ပါ။ SSD ကို ဝယ်ကတည်းကမူလပါတဲ့ laptopဆိုတာ လက်ချိုးရေလိုရသေးတယ်နော် ။ MSI Gaming laptop ၁၄သိန်းကျော်တွေလောက်မှာတော့ပါတယ်။
#Sonic master song system က Studio Song system ကိုမှအရမ်းမိုက်တဲ့ အသံတွေနဲ့ နားထောင်ရမယ်။
#Battery အားက ရိုးရိုးတွေထက် 2.5 အဆ အားသွင်းမြန်တယ်
Video ကြည့် ရိုးရိုးပဲသုံးရင် အား ၅နာရိအေးဆေးခံတယ်။
Graphic သုံးရင် ၃နာရီလောက်အေးဆေးပဲ။
#Asus Eye Care ဆိုတာက Camputer ကြည့်ရင် မျက်လုံးမထိစေဖို့ 75%အထိ ကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုရင်ဘာလိုသေးလဲ ။
#aww Graphic Intel HD 520 2GB ပါတယ်။
Ok #Intel HD 520 2GB နဲ့ dota autocard အေးဆေး။ GTA V တောင်ရမလားမသိဘူး။သေချာတော့မသိဘူးနော်။ အဲ့မှာLink ပေးထားတယ်ကြည့်ကြည့်
intel 520GB နဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Youtube မှာရှာကြည့်။
Processer 2.4 ကို upTo 2.8 GHz ရတယ်ဆိုတာ Gaming နီးပါတောင်ဖြစ်နေပြီ။
ram 4GB အားမရရင် ထပ်တိုးလေ။ တိုးစရာဆိုဒါပဲပါတယ်။
ကဲကဲ laptop Spec လေးတွေစရေးမယ်။
Screen 15.6 ဆိုတော့ Number key တွေကအစပါမယ်လေ ။
I56Generation ( နောက်မှာ7gen နဲ့ 8gen ပဲရှီတော့တယ်။
Processor 2.4GHz (4 လုံးပါမယ် ) Upto 2.8 GHz ကဲ။
Ssd 128 GB buildin and HHD 1000 GB အမုန်းသုံး။
Battery standby 5hours+
First charging system, eye care system,
Type c buildin , SsD 128 GBauto upgrade,
Window 10 Linces, WiFi , webcam, usb 3.0 2ပေါက်။
HDMI , Sd card slot, ပါသေးတယ်နောက်နှစ်ခု အစုံပဲ။
အပွန်းအဆင်းအနည်းပါမယ်။ 97%သန့်တယ် နောက်ဖုံးကအသန့်ပဲ။ စက်ကပေါ့ပေါ့လေး ။
Ps dvd Drive မပါဘူးနော်။ အဲ့တာကြောင့်ပါးပြိးပေါ့သွားတာ။
phone 420120468 ကိုHello လိုက်ပါ။
ပစ္စည်းကောင်း ဈေးအလွန်တန်လေးမို့ နှစ်ခါမရပါ။
အိတ် ပါမယ်။ Oraginal Adapterပါမယ်။
09420120468 ပါ ။ ၅၂ လမ်း မြို့ထဲ ။
Name: Asus laptop